ငါသာလျှင် ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ အရှင်သခင်: 2009/10
pandora's very serious Tag
(paa daa yaa က သိပ်ခေတ်မီတာပဲ၊ ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်လို့ပြောတယ်၊ Tag တယ်။ ဒီ Tag ကို လက်ခံ ရေးသားတယ် ဆိုကတည်းက ကမ္ဘာ ပျက်တော့မယ် ဆိုတာကို ကျနော် ယုံတယ်ဆိုတဲ့သဘော ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆက်ပြီး မ tag တော့ပါဘူး။ တော်ကြာ ကမ္ဘာပျက်မယ့်အကြောင်း သတင်းရသွားပြီး စိတ်ညစ်နေလိမ့်မယ်။)
"ကမ္ဘာပျက်ခါနီး တစ်လလောက်အလို" ဆိုပါတော့... တဲ့။
ဘုရားသခင်တွေနဲ့ အတူ ရှိရင် ကောင်းမယ်။ သူတို့ ကျနော့်ကို ကူညီနိုင်မယ် ထင်တယ်။
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေကို သနားမယ်။ ကိုယ်ချင်းစာမယ်။
ဘုရားသခင်တွေနဲ့ စကားပြောနည်း သင်မယ်။ ချက်နည်းပြုတ်နည်း နည်းနည်းပါးပါး ရတဲ့၊ စိတ်ရှည်သည်းခံတဲ့၊ သီချင်းဆိုဝါသနာပါတဲ့၊ နည်းနည်း ကတတ်တဲ့၊ သဘောထားကြီးပေမယ့် တခါတရံ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့၊ ရယ်စရာ ပြောတတ်တဲ့ မော်ဒယ်ဂဲတချို့ကိုလည်း ဘုရားသခင်တွေနဲ့ စကားပြောနည်း သင်ဖို့ တိုက်တွန်းမယ်။
ကမ္ဘာပျက်လို့ကတော့ လူကြိုက်များ လူဖတ်များတဲ့ ZarnyWin.blogspot.com လည်း ပလုံပြီပေါ့၊ ၀မ်းနည်းစရာ။
ဒုက္ခပါပဲ၊ ငါက ဘာသာရေး မကိုင်းရှိုင်းတော့ ဘုရားသခင်တွေ ငါ့ကို ကူညီပါ့မလား။ အင်း - ကူကြမှာပါလေ၊ ကူကြမှာပေါ့ သူတို့က ဘုရားသခင်တွေပဲ။
ဘုရားသခင်တွေကို လာဘ်ထိုးဖို့ အဲ - လက်ဆောင်ပေးဖို့ ပစ္စည်းတချို့။
ရှေ့လထဲမှာ အကုန် ပြန်ဆပ်မယ်၊ စိတ်ချပါလို့ အကြွေးရှင်တွေဆီ စာရေးလိုက်မယ်။
ဘုရားသခင်တွေ ကျနော့်ကို ကယ်ချင်မှ ကယ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် နတ်ပြည် နဲ့ ငရဲပြည် ကြိုက်ရာသွားဆိုရင် ငရဲပြည်သွားတာ ပိုကောင်းမယ်။ နတ်ပြည်မှာဆိုရင် နတ်သမီး တဖက် ၅၀၀ နဲ့ နေရမယ် တဲ့။ ဒီအင်အားနဲ့ဆို ကျုပ် သေရချည်ရဲ့။
စာဖတ်သူတွေနှစ်သက်တဲ့ ပေါက်ကရတွေကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူစရာတွေထဲက တခုပေါ့။
ငါတို့ လူသားတွေဖျက်လို့ ကမ္ဘာကြီးက ပျက်ခါနီးနေပြီ။ ဟူး - တော်ပါသေးရဲ့ - - ၊ တော်ပါသေးရဲ့၊ ကမ္ဘာကြီးက သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေတော့မယ်တဲ့။
မာနကြီးတဲ့သူမဟုတ်လို့ဥဒါန်းတွေ ကျူးမနေတော့ဘူး၊ ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ ဘုရားကန်တော့တာမျိုးကိုတော့ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ နေ့တိုင်း လုပ်မယ်။ အသံကျယ်ဖို့တော့လိုတယ် ဒါမှ ဘုရားသခင်တွေက ကျနော့်အသံကို ကြားမယ်။ အသံချဲ့စက်တော့ မသုံးချင်။ အဲဒီလောက်အထိ နားလေးကြမယ် မထင်ပါဘူး။ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ သို့ကလို တလလုံး လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ကို အထာထားမှာပဲ။ ဇာနည်ဝင်းက မဆိုးပါဘူးလို့ သူတို့အားလုံး ထင်သွားအောင် လုပ်ရမယ်း)
plastic and my words
အလှူ နဲ့ ပလပ်စတစ်အသုံးကြမ်းမှု
မြန်မာပြည်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လှူဖွယ်ဝတ္ထုကပ်တဲ့အခါ လင်ဗန်းတို့ ဘာတို့နဲ့ ကပ်ကြတယ်။ အလှူပစ္စည်း တခုခုယူပြီး ကျောင်းသွားရင် ဘုန်းကြီးက လင်ဗန်းရှိတဲ့နေရာကို ညွှန်ပြတယ်၊ ဗန်းသွားယူပြီး ပစ္စည်းကို ဗန်းထဲထည့်၊ ဘုန်းကြီးကို ကပ်၊ ဘုန်းကြီးကလက်ခံ၊ ဆုပေး။
ထိုင်းမှာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဗန်း မသုံးကြတော့ဘူးလို့ ယူဆစရာ။ ဆိုင်တွေမှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ အသင့်ထုပ်ပိုးထားတဲ့ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကို ကပ်သင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ ပလပ်စတစ်ပုံး၊ ပလပ်စတစ်ဆန်ကာတွေ ပုံရောင်းကြတယ်။ လှူချင်သူက အဲဒါတွေဝယ်ပြီး လှူလိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့် ဗန်းအသုံး နည်းသွားပုံ ရတယ်။
ဟိုအပေါ်ကပုံက ချင်းမိုင်မြို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတခုမှာ ရိုက်ထားတာ။ အ၀ါရောင်ပုံးတွေ၊ အ၀ါရောင် ဆန်ကာ (ဇဂါ)တွေ၊ ဇလုံတွေတွေ ထပ်ထား ပုံထားတာတွေ့လိမ့်မယ်။
အထဲမှာ ပါတဲ့ ဖယောင်းတိုင် လိုမျိုး ပစ္စည်းတွေ၊ ရယ်ဒီမိတ် စားစရာတွေ၊ ဆပ်ပြာလိုမျိုး အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေက နေ့တိုင်းသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပလပ်စတစ် ပုံးတွေကတော့ တောင်ပုံယာပုံ ဖြစ်နေပြီပေါ့။ ပြစ်လို့လည်း မဖြစ်၊ မပစ်တော့လည်း သို့ကလို ပုံနေတယ်။
အမှိုက်မဟုတ် ဘာမဟုတ် ပလပ်စတစ်တွေပုံနေရတာက ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ၊ ဝယ်ယူ လှူဒါန်းသူတွေ ကြောင့်ပေါ့။
မြန်မာပြည်မှာလည်း ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေပြီလဲ မသိဘူး။ အမှိုက်မဟုတ် ဘာမဟုတ်တွေ ပုံတဲ့ တနေ့ကိုတော့ ရောက်လာမယ် ထင်တာပဲး(
ဒါက အိမ်နားက ရယ်ဒီမိတ် အလှူပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ဗျာ။ ကမ္ဘာကြီးကို ချစ်ဖို့ လိုက်ပြောရင်တော့ မောတာပဲ အဖတ်တင်မှာပဲ။ လူတွေက သောက်ဂရု မစိုက်တော့ဘူ။ လုပ်သင့်တာက မူလတန်းကတည်းက မျိုးချစ်စိတ်ထက် ကမ္ဘာမြေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ပိုသင်သင့်တယ်။ လူဦးရေလည်း ထိန်းချုပ်သင့်တယ်။ လူများရင် အမှိုက်များတယ်မဟုတ်လား။
ဒါပါပဲ။ တင်ချင်တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က မိုးမခမှာ ပါဖူးတဲ့ ချင်းမိုင်မြို့ မြန်မာသီတင်းကျွတ် ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ပလပ်စတပ်ပုံးတွေ ခြင်းတွေပုံ အရင်တင်မိတော့ လေရှည်မိသွားတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ (ဇင်းမယ်မြို့) ဝပ်ဆိုင်မွန်း မြန်မာကျောင်း၏ ယနေ့ မြင်ကွင်း။
ချင်းမိုင်ရောက် မြန်မာပြည်သား များက မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများ သီတင်းသုံးရာ ဤဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ကာလတွင် အလှူအတန်းပြုလုပ်ရန် စုဝေးရောက်ရှိလျက်ရှိသည်။ မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့သည် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုင်းပြက္ခဒိန်တွင်မူ လပြည့်နေ့က အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့ ဖြစ်နေသည်။ အများစုမှာ ဆိုင်များ၊ အိမ်များတွင် လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမားများ ဖြစ်သည်။
ချင်းမိုင်သို့ ရောက်လာသော မြန်မာပြည်သား တနေ့တခြား များပြားလာသဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လာရောက်သူ အရေအတွက်လည်း များပြားလာသည်။ ကျောင်းပေါ်တွင် တရားနာမည့် ပရိသတ်အတွက် နေရာအခက်အခဲ ရှိလာသောကြောင့် ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို ဖိတ်ခေါ်လျက် ရှိသည်။
ကျောင်းအ၀င်ဝတွင် ရောင်းချသော ဆိုင်များတွင် မြန်မာအသုံးအဆောင်များကို တွေ့ရသည်။ ကျောင်းသို့လာသော မြန်မာပြည်သားများကို ကျွေးမွေးလှူဒါန်းသူများကိုလည်း တွေ့ရသသည်။ စမူဆာ တောင်ပုံယာပုံမှာ တရားမနာမီ ကုန်သွားသည်။ နွားနို့၊ လက်ဖက်ရည်၊ ဖျော်ရည်၊ ကြာဆံတို့ကိုလည်း ထိုနေရာတွင်ပင် ၀ိုင်းဝန်း ချက်ပြုတ် လှူဒါန်းကြသည်။
မြန်မာပြည်သားများ၏ နာရေးကူညီမှုအသင်းကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပြီး အကူအညီပေးလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
ဤပုံမှာ ရှမ်းဘုန်းတော်ကြီးများ သီတင်းသုံးရာ ဝပ်ပါပေါက် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဝင်ပေါက် ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေများ တွေ့ဆုံနိုင်ရန် ဖုန်းဆက်ပြီး ချိန်းဆိုသူများကို ဤနေရာတွင် အများအပြား တွေ့နိုင်သည်။
ဝပ်ပါပေါက်သို့ လာသူ အများစုမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အများစု ဖြစ်သည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း ယနေ့လာရောက်သော ပရိသတ်အတွက် ဖွင့်ထားသည့် အရောင်းဆိုင်များတွင် ရှမ်းသီချင်း စီဒီ၊ ဗွီစီဒီ၊ ရှမ်းစာအုပ်များကို တွေ့ရသည်။
ကျောင်းရှေ့တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲများကို တွေ့ရသည်။ ယာဉ်အသွားအလာ ထိန်းသိမ်းသကဲ့သို့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိဘဲ မောင်းနှင်သည့် မြန်မာပြည်သားများကို ဒဏ်ရိုက်နေကြသည်။ မြန်မာပြည်သား တချို့က ကျောင်းရှေ့ရှိ ကျုံးအနီး အနားယူကြသည်။
ကျောင်းအတွင်းရှိ ဆိုင်တဆိုင်တွင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ တိုဟူးကြော်၊ ခေါက်ဆွဲသုတ်၊ ၀တ်သားချဉ်တို့ကို လက်မလည်အောင် ရောင်းချနေကြောင်း တွေ့ရသည်။
one more crazy tag from Aung Tha Nge
ကဗျာဆရာ၊ ဘလော်ဂါ၊ ဆူရှီကျွမ်းကျင်သူ၊ အာနိုးရွှာဇာနက်ဂါ အုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်နယ်မှာနေသူ မစ္စတာ အောင်သာငယ်က မေးခွန်းတွေ ထပ်ပို့ထားလို့ ၀မ်းသာအားရ ဖြေဖို့ ကြည့်လိုက်တော့ သူပြောသလိုပဲ မလွယ်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ Z နဲ့ အစပြုတဲ့ စကားလုံးတွေက ရှားလို့ပါ၊ ကိုယ့်အင်္ဂလိပ်ကတော့ ကောင်းပါရဲ့း) Rules: It's harder than it looks! Copy to your own note, erase my answers, enter yours. Use the first letter of your name to answer each of the following questions.
1. What is your name : ZarNy Win
2. A four Letter Word : Zar's (ကျွန်ုပ်၏)
3. A boy's Name : Zee Dee (လူရွှင်တော်ဇီးသီး)
4. A girl's Name : တခုမက ပေးလိုက်မယ် - လာလေ့ - - ၊ Zin Zin Zaw Myint, Zin Zin, Zin Mar, Zin Mar Myo, Zin Mar Aung,
5. An occupation : ZARNY WIN Beer, Wine and Whisky factory owner (အရက်ချက်စက်ရုံပိုင်ရှင်)
6. A color : Zarny Win (အဘိဓာန်မှာ Z နဲ့ စတဲ့ အရောင် မတွေ့ဘူး။ အခု ပေးလိုက်တဲ့အရောင်ကို ခပ်မိုက်မိုက်အရောင်လို့ ဘာသာပြန်ကြပါ။)
7. Something you'll wear : zippered pant (ကြယ်သီးတွေနဲ့ဆို အလုပ်ပိုရှုပ်မယ်။)
8. A food : Zee Dee (စားလို့ရတဲ့ဇီးသီး)
9. Something found in the bathroom : Zarny Win (မှန်ထဲမှာ တွေ့လိုက်တာ)
10. A place : Zayap
11. A reason for being late : Zawgyi-One နဲ့ ဏ္ဏ ရိုက်နည်းကို ဂျီတော့ကနေ မေးနေကြလို့
12. Something you'd shout : Zarny Win will never betray the national cause!
13. A movie title : Zarny Win and Thet Mon Myint (ဒီကား ရိုက်မယ်။ ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်မယ်)
14. Something you drink : Zoe (ဇိုးသမားဆိုတာ အရက်သမားကို ပြောတာလား မသိဘူး။ ဒီတော့ - - )
15. A musical group : Zine Wine (ဆိုင်းဝိုင်းဟု အသံထွက်ပါ)
16. An animal : Zarny Win
17. A street name : Ziz Zaz
18. A type of car : Zide Car (ဆိုက်ကားဟု အသံထွက်ပါ)
19. The title ofasong : "Zoo isaresident for Aung Tha Nge's relatives"
(ဒီသီချင်းကို C key နဲ့ တီးရမယ်နော်း)
20. A verb : Zee (ကျေးဇူးရှင်တွေ ကိုယ်ဝန်ရှိတာကို ပြောတာ။ သိတယ်မဟုတ်လား ကျွဲတွေ နွားတွေ ဇီးရှိတယ် ဇီးကပ်တယ် ဆိုရင် ဗိုက်က တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာပဲး)